मनोचिकित्सक फार्मासिस्ट: मानसिक स्वास्थ्यमा फार्मासिस्टको भूमिका के हो? - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण मनोरञ्जन स्वास्थ्य खेलहरु समुदाय, कम्पनी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, औषधि जानकारी समाचार, कल्याण समुदाय, कल्याण कम्पनी कम्पनी, चेकआउट भारी खेल औषधि जानकारी, समाचार प्रेस चेकआउट
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> फार्मासिष्टहरूले कसरी तपाईंको मानसिक स्वास्थ्यको लागि मद्दत गर्दछ
फार्मासिष्टहरूले कसरी तपाईंको मानसिक स्वास्थ्यको लागि मद्दत गर्दछ
मानसिक स्वास्थ्य विकारहरू अनुमान गरिएको छ in अमेरिकीहरूमा १ लाई प्रभाव पार्नुहोस् , र त्यो संख्या वृद्धिमा हुन सक्छ। जब हामी विश्वव्यापी महामारीको क्रममा जीवनमा समायोजन गर्छौं, अन्वेषकहरू र चिकित्सा पेशेवरहरूलाई हामीले जीवनमा परिवर्तन गर्ने सीमितताहरूको दीर्घकालीन प्रभावहरूको मूल्याing्कन गर्ने जिम्मा दिइन्छ।
सीमित वा कुनै सामाजिक जमघटको साथ मानसिक स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन प्रभावहरू के हुन्? जब हामी सामाजिक दूरी, यात्रा सीमितता, र एक विश्वव्यापी महामारीको आर्थिक परिवर्तनमा समायोजन गर्छौं, फार्मासिष्टहरू कसरी बिरामीहरूलाई उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा सहयोग पुर्‍याउँछन्? फार्मासिष्टहरू मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको एक विस्तृत श्रृंखलाको साथ संघर्ष गरिरहेका बिरामीहरूलाई पहिचान, मूल्या assess्कन, र निर्धारित उपचार प्रदान गर्न मद्दतको लागि एक प्रमुख स्थितिमा छन्। फार्मासिष्टहरू हाम्रो समाजमा सबैभन्दा धेरै पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरहरू हुन्।
त्यसो भए, मानसिक स्वास्थ्य फार्मेसी के हो, र मनोचिकित्सक फार्मासिष्टहरूले कसरी बिरामीको मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छन्?
सम्बन्धित: २०२० मा चिन्तासँग कसरी व्यवहार गर्ने
मानसिक अराजकता भनेको के हो?
मानसिक विकार भन्ने शब्दले विभिन्न अवस्थाहरू समावेश गर्दछ जुन अवसाद, चिन्ता, स्किजोफ्रेनिया, र द्विध्रुवी विकार समावेश गर्दछ। मानसिक डिसअर्डरले ध्यान घाटा hyperactivity डिसऑर्डर (ADHD) र स्वतन्त्रतालाई पनि बुझाउँदछ।
डिप्रेसन अमेरिकीहरूसँग सामना गर्ने सबैभन्दा साधारण मानसिक विकार हो। यो अनुमान गरिएको छ कि १ million करोड भन्दा बढी अमेरिकी वयस्कहरूले आफ्नो जीवनमा कम्तिमा एउटा प्रमुख अवसादग्रस्त घटना भोगेका छन्, र ११ करोडले गम्भीर कमजोरीको साथ एक प्रमुख उदासिन एपिसोड भोगेका छन्।
मानसिक विकारहरूको व्यापकतालाई ध्यानमा राख्दै, फार्मासिष्टहरू बिरामीको मानसिक स्वास्थ्यमा हरेक दिन उनीहरूको अभ्यासमा प्रभाव पार्ने स्थितिमा छन्, र तिनीहरू तपाईंलाई मद्दत गर्न सुसज्जित छन्।
मनोचिकित्सक फार्मासिष्टहरूबाट बिरामी परामर्श
हामी अक्सर फार्मासिष्टको भूमिकाको दायरा प्रिस्क्रिप्सन्समा सीमित गर्दछौं। गल्ती नगर्नुहोस् - यो फार्मासिस्टको भूमिकाको एक महत्वपूर्ण अंश हो। तर फार्मासिष्टको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा पर्चेका परामर्शहरू छन्। तपाईंको उपचार योजनाको बारेमा तपाईंसँग खुला कुराकानी, तपाईंको औषधिहरूको बारेमा तपाईंको समझ, र तपाईंको लक्षणहरूले फार्मासिष्टलाई तपाईंको स्वास्थ्यमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पार्न अनुमति दिन्छ। यो जहाँ फार्मासिष्टको भूमिका वास्तवमै खुल्छ!
फार्मासिष्टहरूले दिनहुँ मनोवैज्ञानिक औषधीहरूको लागि अर्डरहरू प्राप्त गर्दछन्। यसमा समावेश हुन सक्छ antidepressants , एन्टी-चिन्ता औषधिहरू , मुड स्टेबिलाइजर्स , वा उत्तेजक । फार्मासिस्ट औषधि सुनिश्चित गर्नका लागि जिम्मेवार छ र उमेर, तौल, र लक्षणविज्ञान जस्ता कारकहरूमा आधारित बिरामीको लागि खुराक उपयुक्त छ। तिनीहरूले बिरामीले लिइरहेका अन्य औषधीहरूसँग अन्तर्क्रियाको लागि जाँच गर्दछन्।
परामर्श विन्डोमा भएको कुराकानी मानसिक स्वास्थ्य फार्मासिष्टको लागि बिरामीको मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने प्रमुख अवसरहरू मध्ये एक हो। यो कुराकानी केवल बिरामीले त्यो विशेष दिनलाई उठाएको औषधिमा सीमित छैन, यो ठूलो चित्रको बारेमा हो। के तपाईंलाई थाहा छ मानसिक स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित औषधिहरूले वास्तवमा मानसिक स्वास्थ्य विकारहरूलाई सुरु गर्न सक्छ। कोलेस्ट्रॉलको उपचार गर्न प्रयोग गरिएको स्ट्याटिन जस्ता सामान्य औषधिहरू, वा एसिड भाटाको उपचार गर्न प्रयोग हुने प्रोटोन पम्प अवरोधकहरूले वास्तवमा उदासिनताका लक्षणहरूलाई जगाउन सक्छ।
यदि तपाईं विभिन्न फार्मेसीहरूमा आफ्नो नुस्खा भर्नुहुन्छ, प्रत्येक फार्मेसीले तपाईं लिइरहनुभएको अन्य औषधिहरूको बारेमा सोध्न सक्छ। यो सुनिश्चित गर्नका लागि कि तिनीहरूले तपाईंलाई कसरी तपाईंको तालिकाले तपाईंको समग्र स्वास्थ्य र विशेष गरी तपाईंको मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गर्न सक्छ भन्ने बारे उत्तम जानकारी प्रदान गरिरहेका छन्।
औषधी पालन पनी मानसिक स्वास्थ्य नतिजामा सफल प्रभाव पार्ने अर्को महत्वपूर्ण कारक हो। औषधि पालनको हदसम्म तपाइँले औषधी लिईएको रूपमा लिईरहनुभएको छ। त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् जुन बिरामीहरू उनीहरूको औषधीको तालिकामा अडिग रहन संघर्ष गर्दछन्। कहिलेकाँही जीवन केवल व्यस्त हुन्छ र हामी बिर्सन्छौं! अन्य पटक, हामी औषधिको बारेमा टिभीमा सुनेका वा देखेको कुराको बारेमा चिन्तित हुन सक्छौं, र हामी एक पेशेवरलाई सोध्न हिचकिचाउँछौं, त्यसैले हामी यसलाई लिन छनौट गर्छौं। केही औषधिहरूले साइड इफेक्टहरू निम्त्याउँछन् जसले गर्दा डाक्टरले सिफारिस गरे जस्तै लिन गाह्रो हुन्छ। तिनीहरूले तपाईंलाई थकित तुल्याउन सक्छन्, तपाईंको पेटलाई दु: ख दिन सक्छ, वा टाउको दुखाइको कारण हुन सक्छ। केहि उदाहरणहरूमा, तपाईको मानसिक स्वास्थ्य विकारको उपचार गर्न छानिएका औषधिहरूले वास्तवमा तपाईलाई यस्तो महसुस गराउन सक्छ कि तपाईको विकारको लक्षण बढ्दै गइरहेको छ। फार्मासिष्टहरू यी सबै अवस्थामा मद्दत गर्न यहाँ छन्!
फार्मासिष्टहरूले उपकरणहरू सुझाव दिन सक्छन् जस्तै क्यालेन्डर वा इलेक्ट्रोनिक रिमाइन्डर तपाईंको औषधि लिन। हामी तपाईसँग केही अन्तरालहरूमा जाँच गर्न बोलाउँदछौं निश्चित हुन चीजहरू राम्रो हुँदैछन्। केहि साइड इफेक्ट कम गर्न वा हटाउन सकिन्छ प्रशासनको समय परिवर्तन गरेर वा खाना लिएर, र फार्मासिष्टले पहिचान गर्न र आवश्यक परिवर्तनहरू सुझाव दिन सक्छ। यदि एक फार्मासिष्टले परिवर्तन क्रममा हुन सक्छ भनेर चिनिन्छ भने, उनीहरूले तपाईंको अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूसँग कुराकानी गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्।
औषधीहरूको लागत कहिलेकाँही बिरामीहरूले उनीहरूको औषधी लिन सक्षम हुने महत्वपूर्ण बाधा हुन्छन्। फार्मासिष्टहरू र उनीहरूको टोलीहरू बिमा कम्पनीहरू र निर्माता कार्यक्रमहरूसँग दैनिक आधारमा काम गर्दछन् बिरामीहरूलाई उनीहरूको औषधि लिनको लागि सबैभन्दा लागत-प्रभावी तरीका पत्ता लगाउन। फार्मासिष्टहरूले तपाईंको प्रिस्क्रिबरसँग कभरेज सीमितताको बारेमा कुराकानी गर्न सक्छन् र सस्तोमा समाधान खोज्न मद्दत गर्दछन्। एकलकेयर फार्मासिष्टहरू र बिरामीहरूको लागि एक विशेष औषधिमा उत्तम सम्भव मूल्य खोज्नको लागि एक ठूलो स्रोत हो।
एक औषधी उपचार योजना बनाउनु जुन एक बिरामीले टाँसिरहन सक्छ मानसिक स्वास्थ्यको लागि सकारात्मक नतीजा सुनिश्चित गर्नका लागि एक महत्त्वपूर्ण मार्ग हो। एक उपचार योजना व्यावहारिक र बिरामीले बुझ्नु पर्छ, किफायती हुनुपर्दछ, र सम्भव भएसम्म थोरै साइड इफेक्टहरू हुनुपर्दछ। तपाईंको फार्मासिष्टले तपाईं आफ्नो उपचारको सफलतापूर्वक पालन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सबै पक्षहरूको साथ मद्दत गर्न सक्दछ।
फार्मासिष्टहरूले कसरी मानसिक स्वास्थ्य मुद्दाहरूको पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ
जबकि एक छ जनसंख्याको महत्वपूर्ण रकम मानसिक स्वास्थ्य विकारहरू द्वारा प्रभावित, धेरै तिनीहरूसँग सम्बन्धित कलंकको कारणले उपचारको खोजी गर्न सक्दैनन्। फार्मासिष्टहरू, हेरचाहको सबैभन्दा पहुँचयोग्य बिन्दुमध्ये एक हो, मानसिक स्वास्थ्यमा खस्कनेका लक्षण र लक्षणहरू पहिचान गर्न अद्वितीय स्थितिमा छन्। बिरामीहरू सामान्यतया फार्मेसीमा नियमित आधारमा हुन्छन्, कहिलेकाँही हप्तामा धेरै पटक। अन्तर्क्रियाको यस फ्रिक्वेन्सीले फार्मासिष्टहरूलाई परिवर्तनहरू पहिचान गर्न सक्ने क्षमता दिन्छ जुन बिरामीको मुड, संज्ञानात्मक समारोह, वा समग्र स्वास्थ्यमा देखा पर्न सक्छ। बिरामीहरूको साथ जाँचले हामीलाई यी परिवर्तनहरूको मूल्या assess्कन गर्न र आवश्यकता अनुसार रेफरल गर्न अनुमति दिन्छ। फार्मासिष्टहरू स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासँग परिचित छन् र प्रदायकहरूले संदिग्ध डिसआर्डरको लागि उपचार सुरू गर्न ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिन सक्छन्।
कहिलेकाँही बिरामीहरू मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा पर्दछन् र कहाँ जान्छन् थाहा हुँदैन। फार्मासिष्टहरू स to्कटको समयमा पनि, मद्दतको लागि उपकरणसहित सुसज्जित छन्। हामीसँग हटलाइन जानकारी कुनै पनि घडीमा पुग्न मद्दत गर्न उपलब्ध छ। हामी परिवारको सम्पर्क, यातायात, र स्वास्थ्य सेवा पहुँच को मद्दत गर्न सक्दछौं। यदि तपाईंलाई कहिले लाग्छ कि तपाईं मानसिक स्वास्थ्य संकटमा हुनुहुन्छ, र कसलाई सम्पर्क गर्ने भनेर थाहा छैन भने तुरुन्तै आफ्नो फार्मासिष्टलाई भेट्नुहोस्।
हामी स्वस्थ जीवन कसरी बिताउने भनेर धेरै रिमाइन्डरहरू र सुझावहरू पाउँछौं, र कसलाई सुन्ने वा के गर्ने भन्ने कुरामा अलमलिन सजिलो छ। फार्मासिष्टहरू ज्ञानको भण्डारको साथ सजिलैसँग पहुँचयोग्य, उच्च प्रशिक्षित बिन्दु हो। यदि तपाईलाई शंका लाग्छ, वा तपाईलाई ख्याल गर्ने कोहीले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या भोगिरहेको हुन सक्छ, तपाईको फार्मासिष्टसँग कुरा गर्नुहोस्।
लिस्टेरिन र सेतो सिरका toenail कवक को लागी
म कसरी जान्दछु यदि योजना बी काम गरिरहेको छ
dilaudid को लागी सामान्य नाम के हो
उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न प्राकृतिक तरिका
पुरुष चार्ट को लागी सामान्य रक्त शर्करा को स्तर